Emphakathini wanamuhla kuba abantu yivelakancane ngubani okungenani kanye ngonyaka uvakashele enkundleni yemidlalo. Endabeni engcono lokhu kwenzeka kanye eminyakeni emihlanu. imfundo Cultural buphela ngaphansi ukuhlaselwa umsebenzi futhi ukuphila kwansuku zonke. Le ndlela self-ukuthuthukiswa, yebo, akusho ukupenda emphakathini wanamuhla. Mhlawumbe isizathu salokhu ukungenzi kuyinto ukwenqena zabantu, futhi mhlawumbe ukuntuleka ezingeni ofanele amatiyetha kwezinye izifunda. Ngokuphathelene ezingeni kwabakhileyo Perm lapha lucky kakhulu. Futhi nakekela emasiko futhi bengafundile kumane nje isono, ngoba umuzi wazo emangalisa Tchaikovsky Perm Opera kanye Ballet Theatre.
Uphawu oyinhloko Perm
Perm State Opera kanye Ballet Theatre yasungulwa ngo-1870. Ngo-1879, u th isizini kuqala udonga lwamatshe lesi sakhiwo wavulwa sibonga iminikelo yezakhamuzi zendawo. Umklami isakhiwo esenziwa A. Karwowski. nethonya elikhulu ekuthuthukiseni ethiyetha zazikade zisusiwe khona kule minyaka 1941-1945, Opera kanye Ballet Theatre we Kirov eLeningrad. Ngenxa nethonya elinjalo Perm ivule isikole ballet ezingeni international. Ngo-1954, Perm Opera kanye Ballet bukhanye phezu qophelo Bolshoi Theatre. Kwakuwusuku ukusebenza lokuqala yesifundazwe ezindongeni Grand. Igama Petra Ivanovicha Chaykovskogo wanikwa ethiyetha ngo-1965, ngo-1969 wabonwa njengenhlangano zezemfundo. Perm Tchaikovsky Opera Ballet Theatre njalo elokhu ivela futhi sifuna ukujabulisa izivakashi zabo.
ukuthuthukiswa mlando entsha
Ngo-2011, kodwa leyo ndawo yeshashalazi uye wangenela ibe sibonga entsha inkathi bakwazi ukuba ongavamile umqondisi kwezobuciko uTheodore Currentzis. Wethula i-repertory ukuhlela entsha isimiso, ogxile ukuboniswa ukusebenza amayunithi ngabanye. Ngo-2013, Tchaikovsky Opera kanye Ballet Theatre Perm walwaphula amarekhodi, njengoba waqokelwa "Isivuvu Golden" e nesikhombisa izigaba. Ukulandela imiphumela yaseshashalazini lithole imiklomelo emine. Futhi ku arsenal of the Opera kanye Ballet Theatre lokuphakamisa ekamelweni choir kusukela play "Indian Queen" ngesikhathi umklomelo Opera Imiklomelo. Lokhu ukusebenza yisibonelo umkhiqizo yimpumelelo zokudala. Waba 2013 owawina indondo yaseshashalazini Casta Diva, ngempumelelo babuka eSpain, eFrance nase-Ireland.
An icala ezithakazelisayo
Ngo-February 1937, kodwa leyo ndawo yeshashalazi wadlala ukusebenza "Eugene Onegin", esahlanganisa ubone umshayeli ovelele Valery Chkalov. Esiteji, ehlotshiswe eziningi amakhandlela, washiya Heroine Tatiana Larina. Lo mlingisi, owenza lokhu indima iye owembethe i iwigi ngokufanele. Doigryvaya actress esiteji izimisele ngakho ongaphakeme kuya ikhandlela, ilangabi ukuthi ubanjwe wigs yakhe emangalisayo. Kulesi simo esibucayi Chkalov awuzange ishaqeke, ngomzuzwana bephuthuma kusukela embhedeni uhlangothi, yaklebhula ithoshi amalangabi ukuba actress amkhiphe ikhanda lakhe. Ekuphetheni play, akakwazanga uyeke amazwana kwaphawulwa encwadini ethi yezivakashi zokuhlonipha, ukuthi ukusebenza iyamangalisa ngempela.
Minyaka yonke, Perm Opera and Theatre Ballet usengumhleli "Diaghilev Festival". Nge abagqugquzeli uzame ukwenza umcimbi ezingeni eliphakeme unyaka ngamunye, futhi kubangele resonance emphakathini. Lo mkhosi uhlukile, futhi ukuhlangabezana kwesibili akunakwenzeka. Kunenkolelo e Perm ngo-2003 ngenhloso yokulondoloza nokuthuthukisa amasiko amaGreki Russian elihlobene ne igama impresario abadumile, abanamakhono Sergeya Dyagileva. Sasihlukile kuzo zonke ezinye imikhosi multi-uhlobo yayo. Umqondo lo mcimbi kubonakala esibukweni kwesikhathi "Izinkathi Russian" Diaghilev. Uhlelo "Diaghilev Festival" kuhlanganisa eziningi ezenziwe ahlukahlukene - a okomhlaba kwekilasi opera ballet ukusebenza nge yesimanje umdanso troupes, imisebenzi embukisweni, symphony amakhonsathi, izinhlelo, okuyinto chamber, isitho kanye jazz. Futhi-ke, eyingqayizivele zazo "Diaghilev ukufundwa", kanye zokuhlola ka sici amafilimu.
Empeleni leli hholo, okuyinto uthando
Perm yaseshashalazini uthando, kuthiwa, kunconywa. Ayikho isivakashi ababengeke bejabule ukusebenza okwethulwa ngayo. Kusukela Izibuyekezo ungabona ukuthi umuzi akunakwenzeka ukuba ukucabanga ngaphandle Opera and Theatre Ballet. Izivakashi bayakwazisa eliphakeme lokwentiwako, elicwengisiswe elingaphakathi, yebo, i qembu kakhulu. Perm izakhamizi ngokuvamile ukuya imikhaya yaseshashalazini. Izibuyekezo elihle kunawo endows umdanso we-ballet "The Nutcracker". Ngokusho izivakashi yamabhayisikobho, ngobusuku bangaphambi yakhe kumele ubone yonke Unyaka omusha.
Kusukela ngo-January 2011, i-Perm Academic Opera and Theatre Ballet usezuze umqondisi omusha kwezobuciko kumuntu Teodora Kurentzisa. Abanolwazi futhi umqhubi abanamakhono kuhanjiswe ku Perm eyodwa, kodwa kanye abaculi kwe-orchestra Musica Aeterna Ensemble. Ngaphansi kwesandla sakhe, irekhodi eyayibekwe, "The Rite of Spring" by Stravinsky, okuyinto waqaphela njengoba best in the world. Ngenxa yalesi sitatimende Currentzis kuyi-orchestra ukhishwa ECHO Klassik 2016. Njengoba yaziwa, lo repertoire we Perm Opera kanye Ballet Theatre ukubeka best of the best. Lokho sinjalo umqondisi kwezobuciko noTheodore Currentzis. Ngokukamagazini i-Opernwelt, nguye "Umqhubi Yonyaka." Lokhu isimo waklonyeliswa ngesisekelo imibono kanye baxgeki ayisihlanu Melika naseYurophu.
art abaqondisi ukusebenza ngaphansi kokuqondisa Teodora Kurentzisa, amalungu qembu, nabaqashwa, isivakashi soloists kanye nabaqondisi. Lokho inkampani lapho sibhekene nanoma yikuphi yaseshashalazini. qembu Ballet usebenza ngaphansi kokuqondisa Vitaly Dubrovin futhi phakathi amaqembu phezulu emihlanu Russia edume kakhulu. Ngo arsenal of abadansi eyinkimbinkimbi - Irina Bilash, Poliny Buldakovoy no-Alexandra Surodeevoy - ukusebenza omangalisayo mayelana amabili ngamunye wabo wenza lolungenamaphutsa Masha e "The Nutcracker" ballet. Abaculi we Perm Opera kanye Ballet Theatre - Sergey Mershin Herman Starikov, Denis Tolmazov Ruslan Savdenov futhi Nikita Chetverikov. Sergey Mershin - isosha Perm Theatre. Wayemuhle ku qembu ngo-2000, futhi kusukela ngaleso sikhathi uye abe ubuso ukusebenza ezifana "Swan Lake", "Romeo and Juliet", "The Four Seasons" kanye nabanye abaningi.
Isiko kanye yesimanjemanje
On qophelo Perm Theatre okuhleliwe ngaphezu ukusebenza kweshumi izinhlobo ezehlukene. Fans of the zabuna bayakhuthazwa ukuvakashela i-ballet "Umthombo Bakhchisarai". Lokhu ukuvuselelwa Rostislav Zakharov 1934. Ukukhiqizwa omangalisayo "Sleeping Beauty" - indaba yothando mayelana intombazane enhle ulele phezu inganekwane Sharlya Perro. Futhi, umbukeli unikezwa ithuba ugxumela wezwe opera ubone "Prince Igor", "Mma Butterfly", "The Barber waseSeville." Futhi-ke, futhi elalidume kunawo wonke futhi umbukwane kuba ballet "Swan Lake" nge touch of nendumezulu romantic we-German kanye British isitayela prerafaelistov. Esiqintini ballet ku ukushintshashintsha Perm Theatre ingasebenza modified: protagonist - Kunyatheliswa Zigfrid, ubani ozama ukuntshontsha umphefumulo genius Rothbart, ngesikhathi i-ballet classical, umlingiswa oyinhloko - Princess Odette.
Sezomlando isakhiwo yaseshashalazini kudinga ukulungiswa alikwazi ukukhonza kahle esilinganayo. Ngakho-ke, ukuze ususe kuwo umthwalo kancane, ukuphathwa uye kuhlelwe ukwakhiwa kwesakhiwo. Kucatshangwa lokhu kuzoba isakhiwo yesimanje futhi functional, esungulwe ngokuhambisana namazinga omhlaba, kodwa kucatshangelwa izidingo Russian. Ukuma isakhiwo lizofana uhlamvu "T", ezakhiwe confluence isakhiwo mlando yaseshashalazini kanye entsha okuyinto. isakhiwo ngasinye kuyodingeka esiteji ayo nehholo. Kodwa ngo-2015, abaphathi unqume ukulahla iphrojekthi yalolu hlobo, kusukela nokuqaliswa kwalo ungase ube nomthelela omubi isakhiwo mlando we Perm Opera and Theatre Ballet. Manje ilungiselela iphrojekthi ukwakhiwa ehlukile isakhiwo ezimele.
Umuthi 'Sumamed' angina izingane kanye nabantu abadala.
Melamine isipanji: ukubuyekezwa, umonakalo kanye inzuzo, imfundo manual
I ihluzo in the "Pascal": izici, izindlela indalo nezibonelo